टियू मैदनका कर्मचारीलाई सन्दीपले दिए १ लाख रुपैयाँ - सबै खेल
टियू मैदनका कर्मचारीलाई सन्दीपले दिए १ लाख रुपैयाँ
१४ श्रावण २०७७, बुधबार १९:२५ July 29, 20200Comments sandeep lamichhane
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान त्रिवी क्रिकेट मैदानका कर्मचारीलाई नेपाली युवा लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न जानुअघि अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपले टियू मैदानमा कार्यरत कर्मचारीलाई १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्न घोषणा गरेका हुन् ।
‘यो मेरो तर्फबाट सानो सहयोग हो । सायद सहयोग अलि ढिला पनि भयो कि ! कर्मचारीहरु पीडामा गुज्रिनु भएको थियो कि ! नजिकबाट नियाल्न त सकिन !’, बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनम सन्दीपले भने, ‘सबै जनाले समयमा तलब पाउनु भएको रहेनछ । उहाँहरूको लागि एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु ।’
हाल त्रिवि मैदानमा १४ कर्मचारी कार्यरत छन् । आफूहरु जहिले आउँदा समेत इन्डोर, मैदान, पिच सबै तयार बनाई राख्नेहरुका लागि आफूले सानो सहयोग गरेको सन्दीपले बताए ।
सिपिएल खेल्न सन्दीप बिहीबार चाटर्ड फ्लाइटमार्फत् अमेरिका हुँदै ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो पुग्ने छन् । सन्दीप आइतबार ट्रिनिडाड पुग्ने बताइएको छ । त्यहाँ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कोरोना परीक्षण गरेर सन्दीप टिमसँग समावेश हुने छन् ।
सिपिएलका लागि सन्दीप यसपटक जमैका तलैवासमा आबद्ध भएका हुन् । यसअघि सन्दीपले सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रिओट्स र बार्बादोस ट्राइडेन्समा आबद्ध थिए । सन्दीपको टिममा जमैकामा आन्द्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवेट, तब्रिज साम्सी, आसिफ अली ओसाने थोमसलगायत खेलाडी छन् ।
सिपिएल अगस्त १८ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा हुने छ । सन्दीपको टिम जमैकाको पहिलो खेल अगस्त १९ मा सेन्ट लुसिया जुक्ससँग खेल्ने छ ।
← सिपिएल खेल्न सन्दीप बिहीबार वेस्टइन्डिज जाने
रियल मड्रिड सर्वाधिक ब्रान्ड भ्यालु भएको क्लब →
टि–२० खेलका लागि महिला राष्ट्रिय टिमको घोषणा
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०३:५६ 0
महिला क्रिकेटमा प्रदेश १ र २ विजयी सुरुवात
५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०३:१२ 0
‘क्याप्टेन किलर’ सन्दीप
१७ पुष २०७५, मंगलवार १०:४२ महेश कार्की 0